Mpanamboatra sy mpamatsy entana feno fehin-kibo China | Hengrong
Kitapo feno fehikibo feno T120
Dimension: 90 * 90 * 120cm, φ120 * 150cm na araka ny takinao
Ambany: fisaka / kintana akaiky / pajama akaiky / swan
Fakantsary dafety 1500kg: 5: 1
1 -kevi-pitantanana Virijiny 100% PP 1400D 14 * 14 tsy misy akanjo 90x90x120cm 1
2 ambany Virijiny 100% PP 1400D 14 * 14 tsy misy akanjo W = 90cm L = 90cm 1
3 spout famenoana ambony PP90gsm loko fotsy tsy misy akanjo Φ45 * 45cm 1
5 fehikibo fehikibo Virijiny 100% PP 3500D W = 7cm 4
1 miaraka amin'ny UV voatsabo, Notsaboina tamin'ny loko beige BAG
Fomba fanaovana: karazana toradroa, spout ambony, fisaka ambany, fehikibo manainga manjaitra tanteraka miampita ny ambany dia toy ny X, loko fotsy UV voatsabo
Anarana Kitapo feno fehikibo feno T120
lafiny 90 * 90 * 120cm
Tahan'ny fiarovana 4: 1 5: 1 6: 1
karazana lamba tubular / 4 patch
fehin-kibo manainga fehin-kibo manjaitra tanteraka amin'ny vatana ary miampita ny ambany toy ny salotra
antontan-taratasy A4 fanidiana mahazatra / zip eo afovoany
UV voatsabo 2month / 3month
Fomba fanaovana Fomba fanaovana: karazana toradroa, spout famenoana ambony, fisaka ambany, fanjairana fehikibo tanteraka amin'ny vatana ary hiampitana ny farany ambany toy ny hazo fijaliana, fanjairana fehikibo iray manjaitra ny vatana, loko fotsy voatsabo UV
fampiasana varimbazaha, vary, katsaka, varimbazaha, lafarinina, soja, sira, siramamy, sakafon'ny trondro, vy, vy, volamena, volafotsy, voasarimakirana, sokay, fasika, simenitra, akora fananganana, indostrialy sy fitrandrahana, simika sy ny sisa.
Kitapo FIBC amin'ny raharaha fampidinana, famoahana entana ary fitaterana mila fitandremana
1. Aza mijanona eo ambanin'ny kitapo fitoeran-tsakafo mandritra ny fiakarana.
2. Rehefa miasa ny kamiao forklift dia ahantona amin'ny tadivavarana na amin'ny afovoan'ny tady mihantona ny forklift. Aza mikorisa, manainga na mitanila na manangona kitapo FIBC.
3. Aza manosotra, manisy hook na mifandona amin'ireo zavatra hafa ao amin'ilay fandidiana.
4. Aza atodiho any ivelany ny tadin'ny antsamotady.
5. Rehefa miasa amin'ny kamio forklift ny kitapo FIBC dia aza atao ny mifandray amin'ny fork na miditra ao amin'ny vatan'ny kitapo mba hisorohana ny famakiana ny kitapo FIBC.
6. Rehefa mikarakara ao amin'ny atrikasa dia manandrama mampiasa paleta, aza mampiasa forklift mba hikororohana kitapo FIBC, ary ento izany rehefa mihozongozona.
7. Tazomy ny kitapo FIBC mandritra ny famoahana, famoahana ary fametahana.
8. Aza tarihinao amin'ny tany na amin'ny beton ny kitapo FIBC.
9. Tsy tokony hamporisika anao hitazona kitapo any ivelany isika, indrindra mandritra ny fotoana maharitra, Rehefa voatery hitazona izany eny ivelany, ny kitapo FIBC dia tokony hapetraka eo amin'ny talantalana, ary tsy maintsy rakofana tsara amin'ny lamba mihosin-koka.
10. Aorian'ny fampiasana azy dia fonosy lamba gony opaque ny kitapo FIBC ary tahirizo amin'ny toerana misy rivotra izy io.
Teo aloha: Kitapo feno fehikibo feno HF-3
Manaraka: Kitapo feno fehikibo fenoinaHF-4
U + 2 Kitapo Bulk tontonana HU-25
Kitapo lehibe FIBC PP 1 ton lava UV voatsabo haingana ...
HT-17 Yellow FIBC taonina gony lehibe jumbo, lava ...
Kitapo lehibe U + 2 tontonana HU-27
U + 2 Kitapo Bulk tontonana HU-20